एक लुकेको क्यामेरा प्रयोगको कानूनीता OMG समाधानहरू
लुकेको क्यामेरा प्रयोगको कानूनीता
लुकेका क्यामेराहरूको कानुनी र अवैध स्थापना बीच असमानता आज केहि संयुक्त राज्य अमेरिका भर मा मानिसहरूलाई विचलित गर्न को लागी हो र तिनीहरूले लुकेका क्यामेरा को उपयोग को वैधानिकता को अवस्था को बारे मा सोध्न। यसका लागि उद्देश्य यो हो कि जब कुनै क्षण लुकाईएको क्यामेरा अवैध हुन्छ, खैरो क्षेत्र हुन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रत्येक राज्यसँग यसको लुकेका क्यामेराहरूको वैधानिकता सम्बन्धी नियमहरु छन् र हेरचाह उपकरणहरु को स्थापना को सामान्य बनाउन को लागी कठोर बनाउँछ। सामान्यतया बोल्दा, तपाईको सार्वजनिक ठाउँमा वा घरमा लुकेका क्यामेराको साथ निगरानी गरिएको भिडियो रेकर्ड गर्नु अवैधानिक छैन तपाईको रेकर्डिंग व्यक्तिको अनुमति बिना। यद्यपि केही छुटहरूलाई पछ्याउनुपर्दछ, वा यो अवैध हुन्छ। यससँग परिचित हुनुहोस् र तपाईंको राज्य कानूनले तपाईंलाई यो निर्णय गर्न सजिलो बनाउँदछ कि तपाईंको सुरक्षा क्यामेराको स्थापना कानूनको साथ सही छ वा छैन।
चाहे तपाईं आफ्नो सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको काम गर्ने ठाउँमा क्यामेरा राख्दै, वा तपाईंको सम्पत्तीको बाह्य भागमा क्यामेरा स्थापनाको विचार गर्दै, तपाईं सम्भवतः आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ यदि तपाईं प्रक्रियामा कुनै कानून उल्लting्घन गर्दै हुनुहुन्छ भने। के तपाईंले व्यक्ति अद्यावधिक गर्नु पर्छ यदि तिनीहरू क्यामेरा निगरानीमा छन्? के त्यहाँ केहि स्थानहरू छन् जुन क्यामेरा स्थापना भएको बेला अवैध छन्? तपाईं पक्कै पनि गोप्य क्यामेरा राख्ने वैधानिकता मा आफैलाई सिकाउन चाहानुहुन्छ, मान्छे मा अवैध जासूसी पक्राऊ को अपराध मानेर तपाईं अगाडि बढ्न को लागी राम्रो छैन।
हामी क्यामेरा राख्ने मान्नको लागि सबैभन्दा धेरै साधारण ठाउँहरू अवलोकन गर्ने छौं, र जब यसलाई कानुनी बनाम अवैध ठानिन्छ।
जासुसीको वैधानिकता दुबै नैतिक र नैतिक मुद्दा हो। संघीय कानून सामान्यतया जासूसलाई कानुनीको रूपमा हेर्ने अवस्थामा, त्यहाँ उदाहरणहरू छन् जब जासुसी अवैध हुन्छन्। निजी ठाउँमा वा घृणित उद्देश्यको लागि लुकाइएको क्यामेरा राख्नु लुकेका क्यामेराको प्रयोगलाई अवैध बनाउँछ। राज्यका विभिन्न प्रकारका सर्भेलेन्स र रेकर्डि technology टेक्नोलोजीको प्रयोगमा कानूनहरूको बिभिन्न सेट छ किनकि तपाईं आफ्नो राज्यमा यी कानूनहरूको साथ तपाईंलाई पहिचान योग्य हुनुपर्दछ। निजी ठाउँहरू जस्तै बाथरूममा, जासूस क्यामेराहरू प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो किनभने यी क्षेत्रका प्रयोगकर्ताहरूको पूर्ण गोपनीयताका लागि तार्किक आशा हुन्छ।
लुकेका क्यामेराहरूका बारे कानूनहरू:
कहिलेकाँही, तपाईं एक लुकाइएको क्यामेरा को उपयोग आवश्यकता हुन सक्छ। क्यामेरा स्थापना गर्नु अघि, तपाईं केहि नैतिक र कानूनी प्रश्नहरूमा छक्क पर्नुहुनेछ। के लुकेका क्यामेरा अवैध छन्? मैले विषय लुकाएको क्यामेराको उपस्थिति बारे बताउनु पर्छ? संयुक्त राज्य अमेरिका को सबै 50 राज्यहरुमा, लुकेका क्यामेराको प्रयोग कानूनी छ। सार्वजनिक स्थानहरूमा हुँदा, लुकेका क्यामेराहरू प्रयोग गरेर गोप्य भिडियोहरू रेकर्ड गर्न कानूनी हो। यी स्थानहरूमा बाहिरी पार्क, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा स्टोर, कार्यालयहरू, व्यापार केन्द्रहरू, र शहर सडकहरू समावेश छन्। गोपनीयतामा तार्किक अधिकारहरूको बारेमा कानूनहरू अझै सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा गुप्त क्यामेराको प्रयोगमा लागू हुन्छन्। यद्यपि माइन, दक्षिण डकोटा, हवाई, मिनेसोटा, न्यू ह्याम्पशायर, यूटा, कन्सास, मिशिगन, डेलावेयर, अर्कान्सस, जर्जिया, अलाबामा, र क्यालिफोर्निया लुकाइएको क्यामेरा सतर्कता राख्न तपाईंको कर्मचारीको लिखित अनुमति आवश्यक छ। यी राज्यहरूले व्यक्तिगत ठाउँमा र विषयहरूमा अनाधिकृत रेकर्डिंगको कल्पना नगर्ने क्षेत्रमा लुकेका क्यामेराहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिदैन।
राज्यहरू, उदाहरणका लागि, मिशिगनले अधिकार प्रयोग बिना गोप्य क्यामेरा स्थापना वा प्रयोग गर्न यो गलत कार्य होईन।
हामी सबै नानी क्यामेराहरूको बारेमा सुनेका छौं ती क्यामेराहरू तपाईंको भान्जीमा जासुसी गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो जबकि तपाईं काममा वा किनमेलमा हुनुहुन्छ। सामान्यतया बोल्दै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईको रेकर्डिंग गरेको व्यक्तिको अनुमति बिना तपाईको घरमा एउटा गोप्य क्यामेराको साथ निगरानी फुटेज रेकर्ड गर्नु कानूनी छ। त्यसकारण नानी क्यामको प्रयोग बिस्तारै आमाबाबु र अभिभावकहरुमा सामान्य हुँदै गएको छ जसले दिनमा घर बाहिर काम गर्दछ। तपाईंको बच्चाहरू र परिवारको निगरानीको लागि तपाईंको घरमा आयाआ क्यामेरा राख्नु अघि, तपाईंले तपाईंको राज्यमा कानूनहरू पढ्नुपर्नेछ।
उच्च-सुरक्षा उपायहरूको लागि, तपाईं कुनै वकीलसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले आफ्नो क्यामेरा प्रयोग गर्ने योजना बनाउनु भएको निश्चित तरिकाहरूको बारेमा पनि।
एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता, तपाईंले आफ्नो दिमागमा राख्नुपर्दछ, अडियो रेकर्डि and र भिडियो रेकर्डि। बीचको भिन्नता हो। बहुमत राज्यहरूमा, लुकेका क्यामेरा भिडियोहरू रेकर्ड गर्नु कानूनको उल्ल .्घन हो जहाँ तपाईंको विषयहरूमा गोपनीयताको व्यावहारिक अपेक्षा हुन्छ। तपाईंको घरहरूमा, यी क्षेत्रहरूमा बाथरूम र शयनकक्ष समावेश हुन सक्छ यदि तपाईंको विषयहरू तपाईंको घरमा बस्छन्।
क्यामेराहरू घडिहरू, टेडी-भालु इत्यादिमा लुकेका छन्। यी उपकरणहरूले आमाबाबुलाई दिमागको केही हदसम्म शान्ति प्रदान ग .्यो जबकि नानीहरू बच्चाहरूको हेरचाह गर्न आए। जैसा कि तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा लामो वैधता तपाईं एक वाच क्यामेरा को साथ आउन जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो सामान मा छ। सामान्यतया, यी आया - क्यामहरू लुकाउन कानूनी छ। समान कुरा तपाईंको घर र तपाईंको सम्पत्तीमा बाह्य निगरानी प्रणालीको साथ जान्छ। तपाईं कसरी आफ्नो सम्पत्तीमा क्यामेरा प्रयोग गर्ने छनौट गर्नुहुन्छ अदालतमा प्रस्तुत मुद्दाहरूमा हावी हुनेछ। आधारभूत यो हो: कुनै पनि हिसाबले गोप्य क्यामेराहरू रोजगार गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् तपाईको घरमा फिट अवलोकन गर्नुहोस् जबसम्म तपाईका पाहुनाहरूले गोपनीयताको तार्किक अपेक्षा राख्दछन्। तपाईंको घरमा, यी ठाउँहरूले बाथरूम वा शयनकक्ष समात्नेछन यदि विषय सम्पत्तीमा बसिरहेको छ भने।
बच्चाहरूलाई हेरचाह गर्नु, अर्को घरमा कानुनी हुँदैन यदि तपाईंको बच्चा साथीको घरमा जान्छ भने यो तपाईंको बच्चाको सुरक्षाको लागि हो।
प्रत्येक राज्यले विशेष गरी गोप्य क्यामेराको अपेक्षा गर्न सक्ने स्थानहरूमा लुकेका क्यामेराको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैन। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईले यो कानुनी हो - वा नैतिक तवरमा सन्तोषजनक मान्नु पर्छ - कुनै पनि निजी ठाउँमा उसको अनुमति वा अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको गतिविधि रेकर्ड गर्न।
साथै, यो ध्‍यानमा राख्नुहोस् कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा ब्ल्याकमेल वा अन्य गन्दा अभिप्रायको अभिव्यक्त कारण भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्न यो अवैध छ। यदी तपाइँ तपाइँको राज्य मा गोप्य निगरानी को संचालन को लागी अन्य नियमहरु पछ्याउनुहुन्छ भने, यो दिमागमा राख्नु महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ आपराधिक आचरणमा संलग्न हुनुभयो भने तपाइँको अधिकार त्याग्नेछ। लुकेका क्यामेराहरूको पहिचानको लागि, तपाईं थप गुणहरूको लागि हाम्रो गुणस्तर उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
Airbnb को बारेमा:
जे होस्, जब हामी घरहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं, यदि तपाईं एयरबएनबी पाहुनाहरू वा अन्य कुनै प्रकारका व्यक्तिहरूको सेवा गर्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो घरमा स्वागत गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई जासुसी गर्नु अवैध हो। उपवाक्य "गोपनीयताको उचित अपेक्षा", यो नियमनले लुकेको क्यामेरा निजी अवस्थाहरूमा बेडरूम र बाथरूम समावेश गर्न कानुनी छैन भनेर संकेत गर्दछ। यदि तपाईं एक एयरब्नबी होस्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईंको गेस्टरूममा क्यामेरा राख्नु अनुमति छैन। यदि तपाईं मान्नुहुन्छ कि तपाईं अझै यी ठाउँहरूमा क्यामेरा बिछ्याउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले पाहुनाहरूलाई theणी राख्नु हुन्छ उनीहरूलाई अवलोकन गर्नका लागि। जे होस्, त्यो पूर्ण रूपमा छुट्टै मुद्दा हो कि तपाईले एयरब एनबी र अन्य धेरै अनुकूल बनाउनु पर्छ।
लुकेको क्यामेराको सार्वजनिक स्थान:
तपाईंको घरमा क्यामेरा सेट अप गर्नु भनेको एक चीज हो, तिनीहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा कसरी राख्ने? सामान्यतया, निगरानी क्यामेराको प्रयोग सार्वजनिक स्थानमा जस्तै खुद्रा स्टोर, रेस्टुरेन्ट, वा अन्य व्यवसाय स्थान कानूनी हुन्छ। व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानहरु मा बाहिर छ पहिले नै आफ्नो गोपनीयता त्यागेको छ। यो शॉपिंग मल्ल, शहर सडक, पार्क, वा सार्वजनिक वर्ग मा घर बाहिर गोप्य भिडियो रेकर्ड गर्न कानूनी छ। गोपनीयता दिशानिर्देशहरूको उचित अपेक्षा सार्वजनिक स्थानहरूमा लुकेका क्यामेराहरूको सेटि toमा पनि लागू हुन्छ। लॉकर कोठा, परिवर्तन गर्ने कोठा, शौचालय, होटल कोठा, र अन्य निजी क्षेत्रहरूमा गोप्य भिडियो रेकर्ड गर्न यो अवैध छ।
कार्यस्थलमा लुकेका क्यामेरा:
न त संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय सरकारले न त राज्य सरकारहरूले काम गर्ने ठाउँमा लुकेका क्यामेरा रेकर्ड गर्ने नियम बनाएका छन। यदि तपाईं आफ्नो कामको ठाउँमा लुकेका क्यामेरा सेट गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंलाई कानुनी रूपमा अधिकृत गरिएको छ। वर्तमानमा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा व्यापार मालिकहरु प्राय: आफ्नो कानुनी अधिकार भित्र छन् यदि तिनीहरूले आफ्नो कार्यालयहरु र व्यापार को अन्य स्थानहरुमा लुकेका क्यामेरा स्थापना गर्दछ। ब्यापार मालिकहरूले कानूनी रूपमा आफ्ना कामदारहरूलाई लुकेका क्यामेराहरूको उपस्थितिको बारेमा बताउन बाध्य छैनन्, यद्यपि धेरै ब्यापार मालिकहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई लुकेका क्यामेराहरूको उपस्थिति सूचित गर्न रोजे। राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध बोर्डले तोकेको दिशा-निर्देशहरूबाट व्युत्पन्न ठूला निगमहरू, विशेष गरी युनियन मजदुरहरू - ले प्रायः गोप्य क्यामेराको प्रयोगको नियम बनाउने उचित ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दछन्। तर फेरि, त्यहाँ केहि परिभाषित संघीय वा राज्य कानूनहरू छन् कि तिनीहरूलाई त्यसो गर्न आवश्यक छ। एक व्यवसायीको रूपमा, जब तपाइँसँग तपाइँको व्यवसायको ठाउँमा लुकेका क्यामेरा सेट गर्ने कानूनी अधिकार छ तपाइँका कर्मचारीहरूको गतिविधिहरू अनुगमन गर्न। कर्मचारीहरु को आफ्नो कार्यालयहरु र कार्यस्थलहरुमा गोपनीयता मा एक तार्किक अधिकार छ। यदि तपाइँ तपाइँको कामको गोपनीयता को उल्लंघन काम, तपाइँ संग कानूनी कारवाही को अधिकार छ। धेरै मालिकहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई उनीहरूको स्थानहरूमा क्यामेराको प्रयोगको बारेमा सूचित गर्छन् जसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो उत्तम आचरण देखाउँदै आत्मविश्वास दिईन्छ, तर यो बाध्यकारी छैन।
म कार्यस्थलमा लुकेका क्यामेराको प्रयोगको मेरो व्यक्तिगत अनुभव वर्णन गर्दछु। मैले पाकिस्तानको चकवाल शिक्षाविद् स्कूलमा पढाउँछु जुन शहरको एक अग्रणी विद्यालय हो। स्कूलको मालिकले कक्षा कोठा र स्टाफ-रूमहरूमा लुकेका क्यामेराहरू शिक्षक र विद्यार्थीहरूको गतिविधिहरूको अनुगमन गर्न प्रयोग गर्थे। कक्षाकोठा र स्कूलको अन्य कोठामा लुकेका क्यामेराहरू राखेर, स्कूलका प्रिन्सिपल र मालिक विद्यार्थीहरूमाथि शारीरिक यातना जाँच गर्न चाहन्थे किनभने केही शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक सजाय दिन थाले। तिनीहरू आफ्ना शिक्षकहरूको शिक्षाको स्तर बढाउने कर्तव्यको क्रममा सचेत रहन पनि चाहन्थे। त्यसो भए, पाकिस्तानमा पनि यो कानूनी छ।
अन्य उपकरणहरू मार्फत निगरानी:
अडियो निगरानी अर्को शक्तिशाली उपकरण हो जब तपाइँ वरपर नहुनु भएको बेला तपाइँको कार्यस्थलमा तपाइँका कर्मचारीहरू अवलोकन गर्न। लुकेका क्यामेरा निगरानीको कानूनहरू अडियो निगरानी वरपरका कानूनहरूको रूपमा परिभाषित छैनन्। यदि तपाई एक ब्यक्तिगत कुराकानी वा टेलिफोन कल रेकर्ड गर्न चाहानुहुन्छ, संयुक्त राज्य अमेरिका को संघीय कानून बताउँछ कि कम्तिमा एउटा पनि दलहरुलाई सचेत र रेकर्डि toको लागि अनुमति हुनु पर्छ। यसलाई एक पार्टीको सहमति भनिन्छ जुन आज संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरूले यसलाई गर्छन्। क्यालिफोर्निया, कनेक्टिकट, फ्लोरिडा, इलिनोइस, मेरील्याण्ड, म्यासाचुसेट्स, मोन्टाना, न्यू हैम्पशायर, पेन्सिलभेनिया र वाशिंगटन राज्यहरू छन् जहाँ दुई पार्टीको सहमतिले शासन गरिरहेको छ। हवाईले अडियो रेकर्डि .को लागि एक-पार्टी अनुमति अनुमति दिन्छ, तर यदि रेकर्डि device उपकरण निजी स्थानमा अवस्थित छ भने यसलाई दुई-पार्टी सहमति आवश्यक पर्दछ।
तपाइँको अधिकार पहिचान गर्नुहोस्:
यदि तपाईं अवैध भिडियो निगरानीमा हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्नुहुन्छ भने, तपाईं लुकेका क्यामेरा, अडियो बगहरू, र ट्र्याकि devices उपकरणहरू प्राप्त गर्न केवल क्यामेरा डिटेक्टर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सस्तो मूल्यमा यी मध्ये एउटा खरीद गर्नको लागि हाम्रो काउन्टर निगरानी अनुभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सबै भन्दा माथि, तपाईं यी लुकेका क्यामेराहरू कसरी राख्ने भनेर आफैँलाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं एयरबिएनबीका पाहुना हुनुहुन्छ भने, तपाईं होस्टलाई एयरबएनबीमा सूचित गर्न सक्नुहुनेछ। उस्तै चीजहरू होटेलहरूको लागि चलिरहेको छ। तपाईं यो तथ्यको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ कि जब लुकेको क्यामेरा कानूनी हो र जब यो अवैध छ।
पार्क, शपिंग मल्ल, स्कूल, कलेज, व्यापार केन्द्र, कार्यालय, रेष्टुरेन्ट, होटेलमा लुकेका क्यामेराको प्रयोग कानूनी छ तर बेडरूम, बाथरूम, र अन्य गोप्य गोप्य स्थानहरूमा लुक्नको प्रयोग अवैध छ। व्यक्तिगत गोपनीयता वा मालिसियस मनसायको ठाउँमा लुकेका क्यामेरा राख्नु लुकेका क्यामेराको प्रयोगलाई अवैध बनाउँछ।
चाहे तपाईं एक कम्पनी को मालिक हो वा व्यापार वा तपाईं एक कर्मचारी हुनुहुन्छ यदि कानूनी दिशानिर्देशहरू अझै तपाईंको लागि अस्पष्ट छन् र तपाईंलाई गोप्य र जासूस क्यामेराको स्थापना र प्रयोगको साथ कुनै सरोकार छ? कानुनी व्यवसायी वा वकिल पेशेवरसँग छलफल गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई आफ्नो घुमाउने क्यामेरालाई कानुनी रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्न मद्दत गर्दछ। तपाईंको आफ्नै लुकेको क्यामेरा फेला पार्न यदि तपाईं लुकेको निगरानीको कारणले नै ठीक हुनुहुन्छ भने कृपया गुणवत्ता वेबसाइटको लागि हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस्। लुकेका क्यामेराहरू पत्ता लगाउन उच्च-गुणवत्ता उपकरणहरू उपलब्ध छन्।
4401 कुल दृश्यहरू5हेराइ आज